Ampidino KMSpico ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (3.20 MB)
Sintomy ny KMSpico, fandaharana fampandehanana Windows azo antoka, programa fampandehanana birao.
Fa maninona ianao no tokony misintona KMSpico?
Manome tsy voafetra, tsy misy fetra, fampandehanana mandritra ny androm-piainanny rafitra fiasa Windows sy ny programa Office. Azoko lazaina fa ny fomba tsotra sy haingana indrindra hampavitrika sy hanomezana alàlana ny rafitra miasa Microsoft Windows sy ny programa Microsoft Office. Amporisihiko azy io ho anizay rehetra mitady programa fampandehanana Windows / Office tsy misy viriosy
Inona ny KMSpico?
Fitaovana azo antoka indrindra aminny fampandehanana, fahazoan-dàlana, fampahavitrihana maimaimpoana ny rafitra miasa Windows (10, 8.1, 8, 7, Vista) ary ny programa Microsoft Office (2016, 365, 2013, 2010).
Ahoana ny fomba hampiasana ny fidirana aminny Windows / Office aminny KMSpico?
Ireo fitaovana fampandehanana sy fahazoan-dàlana izay hatoroiko ho anireo izay mampiasa ny rafitra miasa ao aminny Windows sy ny Office program anny Office dia eo an-tamponny lisitra. KMSpico, programa fampandehanana Windows maimaimpoana, madio sy ara-dalàna, dia manohana ny rafitra 32-Bit sy 64-Bit. Tsy toy ny fampahavitrihana KMS, esoriny ny fetra 180 andro aminny alàlanny famerenana ny kaontera indroa isanandro. Mamela anao hampihetsika ny Windows sy ny Office mandritra ny androm-piainana. Tsotra ihany koa ny fampiasana azy. Mba hampavitrika ny Windows sy ny Office, ny sisa hataonao dia; Manokatra KMSpico ary manindry ny bokotra mena. Hanana rindrambaiko Windows sy Office manana fahazoan-dàlana ao anatinny segondra vitsivitsy ianao.
Andininy Windows azonao ampiasana aminny KMSpico:
Windows 8 (Rehetra)
Windows 8.1 (Rehetra)
Windows 10 (rehetra)
Andinin-birao azonao ampiasana aminny KMSpico:
Office 365 (Rehetra)
Windows Versions azonao ampiasaina aminny KMSpico:
Fampidinana programa Windows activation (activation)
Fampidirana Windows (fampahavitrihana)
Windows 7 fampahavitrihana (fampahavitrihana)
Windows 8.1 fampahavitrihana (fampahavitrihana)
Windows 10 fampahavitrihana (fampahavitrihana)
Fampandehanana Windows Vista (fampahavitrihana)
Fampandehanana Windows 10 Office 365
Tsy misy virus ny activation Windows 10
Programme fampandehanana Windows
Windows 7 fandaharana fampahavitrihana
programa fampandehanana Windows 8
Programme fampandehanana Windows 8.1
Programme fampandehanana Windows 10
Programme fampandehanana Windows Vista
Fanavaozana ny fahazoan-dàlana Windows
Program momba ny fahazoan-dàlana Windows
Fampiatoana Microsoft Office (fampahavitrihana)
Fampaherezana Office 365 (activation)
Office 2016 fampahavitrihana Tiorka (fampahavitrihana)
Programme fampandehanana Office 365
Fitaovana fampandehanana Office KMS
Haben'ny rakitra: 3.20 MB